Compro ကွန်ပျူတာပညာရှင်များဒစ်ဂျစ်တယ်လက်စွဲစာအုပ် - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
PDF ဖိုင် DOWNLOAD
NOW က APPLICATION သို့ START
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်ကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာမှု 8-13 လအတွင်းနှင့်အတူစတင်။ S ကကျွမ်းကျင်သူဒြေထိပ်တန်းပညာရှင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးထွားမှုအတွက်သက်သေပြသင်တန်းများနှင့်အတူလတိုင်းတဦးတည်းသင်တန်း tudy ။
International USA တွင်မဆိုကုမ္ပဏီအတွက် software ကို developer အဖြစ်အချိန်ပြည့်ပေးဆောင်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်အတူတက်မှနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပျမ်းမျှစတင်နှုန်းမှာတစ်နှစ်လျှင် $ 80,000 ဖြစ်ပါတယ်။
မှာလေ့လာမှ5အကြောင်းရင်းများ
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်
အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များ & စီး Edge နည်းပညာ
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါရန်အနိမျ့ Entry ကြေး
တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှစတင်ကာ Internship နှုန်း $ 80,000
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်နေကြတယ် Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများ
အချိန်ပြည့် Paid Internship များအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်ကိုဆော့ဖျဝဲစနစ်များနှင့် OOP (ဂျာဗား) ကို အသုံးပြု. ဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးရေး, ကို web applications များ, နှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံများ၏ဒေသများရှိအထူးပြုသည်။ လေ့လာမှု core ဒေသများပါဝင်သည်: အဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, web application ကို programming နဲ့ဗိသုကာ, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာများ, စက်သင်ယူမှုနှင့်အတော်ကြာအရေးကြီးသောလျှောက်လွှာဒေသများ။
NEW! ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိမှု ဒေတာကိုသိပ္ပံအထူးပြု
ခေတ်သစ် Programming အလေ့အကျင့် (ဂျာဗားပရိုဂရမ်)
အဆင့်မြင့် Software Development
Web ကိုလျှောက်လွှာဗိသုကာပညာ & ဘောင်
Web ကိုလျှောက်လွှာ Programming
Software များဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Practicum
ခေတ်သစ် Programming အလေ့အကျင့် (ဂျာဗားပရိုဂရမ်) (CS 401)
ဒီသင်တန်းကို object-oriented programming ၏အခွခေံသဘောတရားမြားကိုတွေ့ရမယ်။ ကျောင်းသားများပြန်သုံးနိုင်သောနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်-ထိန်းသိမ်းထား software ကိုရေးနှင့်ဓါတ်ခွဲခန်းတာဝန်ကျများနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်အတူဤအသိပညာပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: ဆော့ဖ်ဝဲ Re-အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ထိန်းသိမ်းနည်းမြှင့်တင်ရန်ကြောင့် object-oriented programming ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အမော်ဒယ်များ, UML လူတန်းစားကားချပ်နှင့်ဒီဇိုင်းအခြေခံမူ။ (4 ယူနစ်)
အဆင့်မြင့် Software များဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (CS 525)
ဒီသင်တန်းကိုဆော့ဖျဝဲစနစ်များကောင်းသောဒီဇိုင်းအတွက်လက်ရှိနည်းလမ်းများနှင့်အလေ့အကျင့်စဉ်းစား။ ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: software ကိုဒီဇိုင်းပုံစံများ, မူဘောင်, ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်းစနစ်များသည်ဤ Multi-level ကို abstraction လျှောက်ထားရန်။ (2-4 ခရက်ဒစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
ဒီသင်တန်း (အဆိုးဆုံး-ကိစ္စတွင်နှင့်ပျမ်းမျှအား-ကိစ္စတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်) algorithms ၏ထိရောက်မှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာများအတွက်နည်းစနစ်များတင်ဆက်ခြင်းနှင့်လူသိများအလွန်ထိရောက် algorithms အမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်။ analysis, ဒီဇိုင်းနှင့် algorithms များအကောင်အထည်ဖော်မှုတန်းတူအလေးပေးပေးအပ်ထားတယ်။ ခေါင်းစဉ်များအချိန်အဖြစ်, ဂရပ် algorithms, combinatorial algorithms, ထပ်မဖြစ်အောင်ဆက်ဆံရေး, Dynamic Programming, NP-ပြည့်စုံပြဿနာများ, နှင့်အချို့သောအထူးအကြောင်းအရာများ (စာရင်းများ, HashTable များ, မျှမျှတတနဲ့ Binary ရှာဖွေရေးသစ်ပင်, ဦးစားပေးစီတန်းအပါအဝင်) ဒေတာအဆောက်အဦများအပေါ်စစ်ဆင်ရေး၏ရှာဖွေနေနှင့် sorting, ထိရောက်မှုများပါဝင်သည် ခွင့်ပြုပါတယ်။ (အထူးအကြောင်းအရာများကွန်ပျူတာဂျီသြမေတြီ, cryptosystems များအတွက် algorithms, အကြမ်းဖျင်း, Big Data များနှင့်အပြိုင်ကွန်ပျူတာတို့ပါဝင်သည်။ )
ကွန်ပျူတာကွန်ယက် (CS 450)
ဒီသင်တန်း၏ရည်မှန်းချက်ကွန်ရက်များမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ကွန်ယက် applications များဖွံ့ဖြိုးခြင်းအားဖြင့်အယူအဆ, ဗိသုကာအခြေခံမူများနှင့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ဝေါဟာရများလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကွန်ယက်ကိုအခြေခံမူတစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်မှု၏အဓိကသာဓကအဖြစ်အင်တာနက်ကိုဖွင့်ဗိသုကာများနှင့်ပရိုတိုကောကို အသုံးပြု. ကွန်ရက်များနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထက်မှအောက်သို့ချဉ်းကပ်အောက်ပါအတိုင်း။ ကျနော်တို့လျှောက်လွှာအလွှာမှာ start နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာ, ကွန်ယက်အလွှာ link ကိုအလွှာနှင့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက် physical layer သည်မှတဆင့်ဆက်လက်။ ကျောင်းသားများအများအပြားကွန်ယက်ကို applications များနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုအတွက်မြင်သာထင်သာကွန်ယက်ကို protocols များခြေရာကောက်ခြင်းနှင့်နားလည်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြည့်စုံအတော်ကြာဓာတ်ခွဲခန်းများဖွံ့ဖြိုး။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
ဒေတာဘေ့စစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (CS 422)
ဒေတာဘေ့စစနစ်များကိုအသုံးပြုသူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ပြု, သတင်းအချက်အလက်စုစည်းနှင့် retrieve ။ ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: relational data တွေကိုမော်ဒယ်; SQL; ER မော်ဒယ်; relational algebra; ဒေတာပုံမှန်; အရောင်းအ; database တွင်အရာဝတ္ထု; ဒေတာလုံခြုံရေးနှင့်သမာဓိရှိ; ဒေတာသိုလှောင်, OLAP နှင့်ဒေတာများသတ္ထုတူးဖော်ရေး; ဖြန့်ဝေ databases ကို; နှင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စီးပွားဖြစ်ဒေတာဘေ့စစနစ်၏လေ့လာမှု။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
Software များအင်ဂျင်နီယာ (CS 425)
Software များအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတနည်းစနစ်မှတဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှကျောင်းသားမိတ်ဆက်တဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများထားပြီး Object ကို oriented ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူယခင်သင်တန်းများအတွက်အချို့သောအတှေ့အကွုံဖူးနှင့် software တ္ထုများအကြားမော်ဒယ်ဆက်ဆံရေး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အခြေခံ UML ကားချပ်အချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာမှာတော့ကျောင်းသားကြံ့ခိုင်အလွယ်တကူထိန်းသိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတူတူအဲဒီကိရိယာချပြီးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ အခါဘယ်လို OO သဘောတရားများနှင့် UML ကားချပ်အရည်အသွေးကို software ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြီးမြောက်ဖို့အသုံးပြုရပါမည်တစ်ဦးက software development နည်းစနစ်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲ format နဲ့ဆွေးနွေးအခြေခံမူရုပ်ပြနှင့်လျှောက်ထားနိုင်သည့်အတွက်သေးငယ်တဲ့စီမံကိန်းကိုန်းကျင်အဆိုပါသင်တန်းစင်တာများ။ သင်တန်း၏အဆုံးအသုံးပြုပုံကျောင်းသား RUP (ဆင်ခြင်တုံတရားညျ့ဝ Process ကို) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနည်းစနစ်၏မြင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီတည်ဆောက်ထားမယ့်အပြေးလျှောက်လွှာ, ရပါလိမ့်မယ်။
Web ကိုလျှောက်လွှာဗိသုကာနှင့်မူဘောင် (CS 545)
အဆိုပါသင်တန်းပလက်ဖောင်းများနှင့်မူဘောင်ကိုဖြတ်ပြီးယေဘုယျဖြစ်ကြောင်းအခြေခံမူများနှင့်ပုံစံများကိုသင်ပေးတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုဆနျးစစျနဲ့နှစျယောကျကြီးစိုးဂျာဗားကို web မူဘောင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မည်, ဂျာဗားဆာဗာ (JSF) နှင့် SpringMVC ရငျဆိုငျရ။ JSF အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအခြေစိုက်မူဘောင်နှင့်ဂျာဗားလုပ်ငန်း Edition ကိုနည်းပညာ stack များအတွက်တရားဝင်တင်ပြချက်မူဘောင်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ SpringMVC ဟာ Core နွေမူဘောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အများဆုံးအသုံးများဂျာဗားကို web မူဘောင်ဖြစ်လာသည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 472 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
Web ကိုလျှောက်လွှာ Programming (CS 472)
လိုအပ်ချက်: CS 220 သို့မဟုတ် CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
(506 FOR) ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအဘို့အသိစိတ်ကို၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
သင်၏ပဌမသင်တန်းအထူးသငျသညျကွန်ပျူတာသိပ္ပံပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖျော်ဖြေထိပ်တန်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်၏အခြေခံတည်ထောင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အလားအလာပွညျ့စုံမှဦးဆောင်ရသော Transcendental တှေးတောဆငျခွများ၏အလေ့အကျင့်အတွက်အမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ သငျသညျတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် "box ကိုထဲက" စဉ်းစားတွေးခေါ်တိုးမြှင့်ထက်သာလွန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းအပါအဝင် TM အလိုအလျောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုကြွင်းသောအရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အကောင်းဆုံးရောနှောဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့လှုပ်ရှားမှုအတွက်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုအထောက်အကူပြုသောအခြေခံမူအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဘဝအောငျမွငျထောကျပံ့ပေးသောအနေနဲ့စံပြနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ (2 ယူနစ်)
Big Data (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ)
Big Data Analytics မှ (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ)
Big Data Technologies က (ဒေတာများကိုသိပ္ပံ)
အဆင့်မြင့် programming language (CS 505)
ဒီသင်တန်းကိုတရားဝင်နည်းလမ်းများနှင့် abstraction ယန္တရားများအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူ programming language ကိုဒီဇိုင်းအတွက်အဆင့်မြင့်သည့်အကြောင်းအရာများသတ်မှတ်ထားသည်။ ခေါင်းစဉ်များဒေတာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု abstraction, syntax နှင့် semantic ၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်ပရိုဂရမ်မှန်ကန်မှု၏သက်သေမဟုတ်သောတွက်ချက် programming ကို, အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်အဆောက်အဦများနှင့်သီးခြားဘာသာစကားများလေ့လာမှုပါဝင်သည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
Big Data (ဒေတာများကိုသိပ္ပံလမ်းကြောင်း) (CS 522)
ခေတ်မီသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အစဉ်အလာဒေတာဘေ့စစနစ်များအားဖြင့်ကိုင်တွယ်မရနိုင်သည်ကိုအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့် repositories ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကိုအထိရောက်ဆုံးလမ်းအတွက်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကတီထွင်သုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုဖုံးလွှမ်း။ ဖုံးလွှမ်းတိကျတဲ့အကြောင်းအရာများ MapReduce algorithms, MapReduce algorithm ကိုဒီဇိုင်းပုံစံများ, HDFS, Hadoop စပျစ်သီးပြွတ်ဗိသုကာ, ချည်ခင်, ဆွေမျိုးကြိမ်နှုန်းကွန်ပျူတာ, အလယ်တန်းစုစည်းခြင်း, ကို web တွား, inverted အညွှန်းကိန်းများနှင့်အညွှန်းကိန်းတဲ့ compression, algorithms များနှင့် Scala အစပျိုးပါဝင်သည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 435 အယ်လဂိုရီသမ်။
Big Data Analytics မှ (ဒေတာများကိုသိပ္ပံလမ်းကြောင်း) (CS 488)
Big Data အသစ်ကသဘာဝသယံဇာတဖြစ်ပါသည်: ဒေတာတိုင်း 12-18 လအတွင်းနှစ်ဆဖြစ်ပါသည်။ ယခုအသစ် Big Data Analytics မှသင်တန်းအသိအမြင်အသစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အကြီးစားကွဲပြားခြားနားဒေတာအစုံတူးဖော်များအတွက်အခြေခံသဘောတရားများနှင့် tools များဖုံးလွှမ်း။ သငျသညျ Wordcloud, PageRank, ဒေတာများ Visual, ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်ပင်များ, Regression, clusters, ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက်နှင့်ပိုပြီးဖန်တီးရန် R ကိုဘာသာစကား၏အသုံးပြုမှုကိုကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအခြို့သောကြီးမားသော Multi-သန်းစံချိန်ဒေတာအစုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်လည်း Twitter ကိုကျွေးမွေးငါ့လိမ့်မယ်။ သငျသညျ Hadoop / MapReduce နှင့်လွှဒေတာများကိုသဘောတရားများကိုလေ့လာသင်ယူမည်, နှင့်တစ်ဦးချင်းသုတေသနစာတမ်းများမှတဆင့်ထိုကဲ့သို့ Spark, Flink, Kafka, မုန်တိုင်း, Samza, NoSQL ကဲ့သို့သောအခြား Apache ကို Big Data စီမံကိန်းများလေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး-of ဖောက်ဒေတာ-သရုပ်ခွဲစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဆုချီးမြှင့်ငွေကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Kaggle.com ကနေပွင့်လင်းစီမံကိန်းများအပေါ်အုပ်စုများအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် IBM က SPSS Model သုံးစွဲဖို့သင်ယူနှင့် Open-source ကိုဒေတာသတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီသင်တန်းတွင်အသုံးပြုအဆိုပါ #1 အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ဖတ်စာအုပ်အဆိုပါနည်းပြသည်ကိုယ်တော်တိုင်ကရေးသားထားသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုလည်းတခြားနေရာ MIT က, Coursera, Google နှင့်မှဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများ၏ကျယ်ပြန့သုံးပါလိမ့်မယ်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီချက်
Big Data Technologies က (ဒေတာများကိုသိပ္ပံလမ်းကြောင်း) (CS 523)
သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်အမျိုးမျိုးသောကြီးတွေဒေတာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီဖို့ရန်သင့်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်အချို့တကယ်အရေးကြီးသော tools တွေကိုထပ်ထည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Big Data ကဘာလဲ "ကဲ့သို့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေပေးခြင်းနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်? အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသောသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သောပါသလဲ သင်ဤကြီးမားသော data ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သလဲ? "ကျနော်တို့ထို့နောက် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတံ့သောကြီးဒေတာနည်းပညာကို stack ကနေကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများနှင့် programming ကိုမော်ဒယ်များလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းစဉ်များထိုကဲ့သို့သော MapReduce, ဝက်, အုံ, Sqoop, Flume, HBase (NoSQL DB), Zookeeper နှင့် Apache ကို Spark ဂေဟစနစ်စီမံကိန်းများအဖြစ် Hadoop ဂေဟစနစ်အတွက်စီမံကိန်းများကိုအချို့ပါဝင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း AWS နှင့် EMR တစ်ခုမိတ်ဆက်စကားကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဓိကအားဖွငျ့ Cloudera ၏တစ်ခုတည်း node ကို Hadoop ဖြန့်ဖြူးနဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (4 ယူနစ်) (ဘယ်သူမျှမကလိုအပ်ချက်)
ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး (CS 466)
ဒီသင်တန်းကိုကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုံးခုရှုထောင့်သို့နက်ရှိုင်းစွာဝင်: လျှို့ဝှက်သမာဓိနှင့်လျှို့ဝှက်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်သမာဓိရှိလုံခြုံရေးမူဝါဒများအဘို့အများအပြားမော်ဒယ်များကိုလေ့လာနေကြသည်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်သမာဓိရှိအာမခံအတွက် cryptography ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အခွားသောအကြောင်းအရာများစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, စာရင်းစစ်, ထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း, ဘုံအားနည်းချက်များနှင့်ကျူးကျော်ထောက်လှမ်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုတစ်ဦးလက်တွေ့လုံခြုံမှုစနစ်၏ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများလုံခြုံရေးစာပေကနေစာတမ်းများကိုဖတ်ရှုနှင့်ပို့ချချက်၌ပေးသောပစ္စည်းကိုမှသူတို့ကိုလျှောက်ထားဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။ (4 ခရက်ဒစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
လုပ်ငန်းဗိသုကာ (CS 544)
ဒီသင်တန်းပိုကြီးတဲ့စကေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါအသုံးပြုသောအခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်မဩဝါဒပေးအာရုံစိုက်။ ကျွန်တော်တို့သည်ရှုထောင့် oriented programming (AOP), နဲ့ Web Services ကမှတဆင့်တခြား applications တွေနဲ့ပေါင်းစည်းမှု (RESTfull Object ကို Relational မြေပုံ (ORM), မှီခိုမှုအ Injection (ကပစ) အပါအဝင်, ဤအလွှာနဲ့ဆက်စပ်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာများကိုသောကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာအလွှာဆနျးစစျလိမျ့မညျ နှင့် SOAP), Messaging နှင့်ဝေးလံခေါင်သီတဲ့နည်းလမ်းကို invocation ။ relational database များကိုနှင့် SQL တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာရှိရမည်။ သင်၌အားကြီးသောသင်တန်းသို့မဟုတ် SQL ၏ကောင်းသောအလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်တော့ EA ၏အဘို့တက်လက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီ CS422 DBMS အဘို့အ sign up ကိုသငျ့သညျ။ (4 ယူနစ်)
စက်သင်ယူ (ဒေတာများကိုသိပ္ပံလမ်းကြောင်း) (CS 582)
စက်သင်ယူ, ကွန်ပျူတာများကိုဒေတာကနေသင်ယူဖို့နိုင်စွမ်းပေးလေ့လာမှု၏လယ်ပြင်နီးပါးတိုင်းသိပ္ပံနည်းကျစည်းကမ်း၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပြီး, ဒေတာကနေအစဉ်အဆက်လေ့လာမှု (အကြောင်း, ခန့်မှန်းသည်) စက်သင်ယူမှု၏အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းစက်သင်ယူမှုနှင့်စက်သင်ယူမှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်ခံသီအိုရီအသစ်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များ၏ In-depth ကိုလွှမ်းခြုံဖို့ဘွဲ့ရ-Level မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ဆက်စပ်မှုနှင့်အတူချဉ်းကပ်အလေးပေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော (Big Data / Data နှင့်သိပ္ပံ, ဒေတာများ Analytics မှရှိ) မှာ Data သတ္တုတွင်း, သဘာဝဘာသာစကားများထုတ်ယူခြင်း, ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Vision ၏, Robotics, ကွန်ပြူတာအသုံးချဇီဝဗေဒနှင့်စာသားနဲ့ Web ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ်စက်သင်ယူမှု၏မကြာသေးမီ applications များ, များစွာဆွေးနွေးထားပါတယ်။ စက်သင်ယူဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, စျေးကွက် & Advertising ကြော်ငြာအရာ၏, အစိုးရ, အင်တာနက်နှင့်အင်တာနက်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
ဒီသင်တန်းသင်ယူမှု Paradigm, algorithms, သီအိုရီရလဒ်များနှင့် applications များအမျိုးမျိုးဖုံးလွှမ်း။ ဒါဟာသူတို့စက်သင်ယူမှုမှသက်ဆိုင်ရာများမှာ insofar အဖြစ်အတုထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်များသီအိုရီ, စာရင်းဇယားများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီကနေအခြေခံသဘောတရားများကိုအသုံးပြုသည်။ ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: (အထွေထွေ / ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသင်ယူမှု, parametric / Non-parametric သင်ယူမှု, အာရုံကြောကွန်ယက်များ, ထောက်ခံမှုအားနည်းချက်ကိုစက်တွေ, ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်ပင်, Bayesian သင်ယူမှု & optimization) သင်ယူခြင်းကြီးကြပ်; unsupervised သင်ယူမှု (Cluster, Dimensional လျှော့ချရေး, kernel ကိုနည်းလမ်းများ); သီအိုရီသင်ယူခြင်း (ဘက်လိုက်မှု / ကှဲလှဲကုန်ချင်းလဲလှယ်; VC ကိုသီအိုရီ; ကြီးမားသောမာဂျင်); အားဖြည့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်သပ္ပါယ်ထိန်းချုပ်မှု။ အခွားသောအကြောင်းအရာများ Hmm (Hidden Markov မော်ဒယ်), ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကွန်ပျူတာ, (ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပိုက်ကွန်နှင့်အတူ) နက်ရှိုင်းသောသင်ယူခြင်းနှင့်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအသေးစိတ်အခြေခံစက်သင်ယူမှုပြဿနာများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်း algorithms များပါဝင်သည်။
သင်တန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအုပ်စုတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပြိုင်အတှကျအသုံးပွုဗိုလ်မှူး open source ဖြစ်ပြီးကိရိယာများ, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အရွယ်မှာစက်သင်ယူမှုခေတ္တစီမံကိန်းလုပ်နေကျောင်းသားများကိုကူညီပေးဖို့ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: အဘယ်သူမျှမ။
မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း Programming (CS 473)
မိုဘိုင်း device ကိုပရိုဂရမ်းမင်း၏အရေးပါမှုကို software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ်မကြာသေးမီနှစ်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဒီသင်တန်းထိုကဲ့သို့သော iPhone, iPad သို့မဟုတ် Android ဖုန်းအဖြစ်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော applications များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျောင်းသားများပြင်ဆင်ကြရသည်။ ဒါကလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကို install ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, စမ်းသပ်, နှင့်မိုဘိုင်း application များဖြန့်ဝေအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဒီသင်တန်းရဲ့အဆုံးမှာကျောင်းသားများ, ဖုံးလွှမ်းပလက်ဖောင်း app တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးသူတို့ကိုတူအောင်ဖန်တီး, အစစ်အမှန်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသူတို့ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုသူများရရှိမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ app store ကိုအပေါ်ထုတ်ဝေရန်နိုင်ကြသည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS472 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
ခေတ်သစ်က်ဘ်အသုံးပြုခြင်း (CS 572)
ဒီသင်တန်း၌သင်တို့ကိုအပြည့်အဝခေတ်သစ်က်ဘ်လျှောက်လွှာကိုတည်ဆောက်ဖို့အားလုံးကိုလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူ SPA ကုမ္ပဏီ၏ရှိသူများအတွက် Programming ဗိသုကာ (လူပျို 's Page က်ဘ်အသုံးပြုခြင်း) လေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ Technologies ကပါဝင်သည်: NodeJS, ExpressJS, TypeScript, AngularJS2, Firebase နှင့် NoSQL databases ကို (MongoDB) ။ အဆိုပါသင်တန်းကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်:
ဘယ်လို C ++ V8 အင်ဂျင်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Node အတွက်ကုဒ်အလုပ်နှင့် Node ဖြစ်ရပ်သည် loop ။
ဘယ်လိုပြန်သုံးဘို့သင့် code ကိုတညျဆောကျပုံနှင့် module တွေနှင့် ExpressJS ကိုအသုံးပြုပြီးအရာကြွင်းသမျှ API ကိုတည်ဆောက်ရန်။
ဘယ်လို NoSQL databases ကိုအလုပ်လုပ်: Mongo အဘိဓါန် Shell ဆိုသည်မှာပေါင်းစည်းမူဘောင်, ပုံတူသတ်မှတ်ရန်, clusters, Shards, Mongoose ORM ။
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို angular (Google ကကျောထောက်နောက်ခံ) ၏နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှု, ပြောင်းလဲခြင်းထောက်လှမ်းခြင်း, လေ့လာသူများနှင့်ဘာသာရပ်များ, အဆိုပါအရိပ် DOM, ဇုန်, မော်ဂျူးများနှင့် Components, စိတ်တိုင်းကျညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပိုက်န်ဆောင်မှုများနှင့်မှီခိုမှုအ Injection, angular Compiler, JIT နှင့် AOF ပေါင်းချုပ်နှင့်အတူရှိသူများအတွက် RxJs ပရိုဂရမ်းမင်း , Form များ (Template: Driven နှင့်ဒေတာများ Driven), ဒေတာများ binding, လမ်းကြောင်း, စောင့်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, သည် HTTP Client ကို, JWT JSON က်ဘ်တိုကင် Authentication ။
operating system (CS 465)
တစ်ဦး operating system ကိုကွန်ပျူတာစနစ်၏ဗဟိုအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများအတွက်သူတို့ကိုသတ်မှတ်ရန်။ သင်တန်းအကြောင်းအရာများ sequential နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါလုပ်ငန်းစဉ်များ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖယ်, အရင်းအမြစ်ခွဲဝေမှု, လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အကျပ်အတည်း, သယံဇာတခွဲဝေ, Processor ကိုအချိန်ဇယားဆွဲ, မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှု, segment နဲ့စာမျက်နှာ algorithms, timesharing စနစ်များ, အချိန်ဇယားဆွဲ algorithms များနှင့်သယံဇာတကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: CS 401 သို့မဟုတ်ဌာန၏ဒြေ၏သဘောတူညီခကျြ။
စင်ပြိုင် Programming (CS 471)
အားလုံးအသစ်ကကွန်ပျူတာတွေအတွက်စံ processor ကိုယခုပိုပြီးလျင်မြန်စွာ program ကို execute ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ရာ multi-core processor ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤအလားအလာအသုံးချမှတစ်ဦးပရိုဂရမ်မာအပြိုင် programming ကိုနည်းစနစ်အချို့ကိုအသိပညာရှိရမည်။ ဒီသင်တန်းကာလအတွင်းကျောင်းသားများအပြိုင်အစီအစဉ်များကိုရေးသားခြင်းနှင့် debugging သူတို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမျှော်မှန်းရလဒ်လက်တွေ့ကျသော Programming ကိုကျွမ်းကျင်မှုအသစ်အဆင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစုံ-Core ပရိုဆက်ဆာများ၏ programming ကိုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ပေမယ့်လည်းစနစ်များ programming နဲ့ဖြန့်ဝေဒေတာဘေ့စပရိုဂရမ်းမင်း operating လိမ့်မယ်မသာ။ ဒီသင်တန်းကာလအတွင်းအသုံးပြုတဲ့ software ကို tools တွေကို Microsoft က Visual C / C ++, Java ကို multithreading စာကြည့်တိုက်များနှင့် OpenMP အသွားအလာအတွက်စံများပါဝင်သည်။ (4 ယူနစ်) လိုအပ်ချက်: ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်းမင်း၏အသိပညာ, Java, C, C ++ ကိုသုံးနိုင်သည်။
Software များဗိသုကာ (CS 590)
ဒီသင်တန်းမှာတော့ကျနော်တို့ microservices သုံးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရွယ်မှာ, testable နှင့်ဒဏ်ခံဆော့ဖျဝဲစနစ်များကိုဒီဇိုင်းကိုမည်သို့၏နည်းစနစ်, အခြေခံမူများနှင့်ပုံစံများကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ monolithic စီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတည်ဆောက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းသေးငယ် microservices နှင့်အခြားအားသာချက်များသို့ကြီးမားသော applications များဖွင့်ခွဲနိုင်ပုံကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကဖြန့်ဝေ microservice ဗိသုကာလည်းအများအပြားစိန်ခေါ်မှုများကိုပေးသည်။ ကျနော်တို့ကဤစိန်ခေါ်မှုများကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်, သူတို့ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လို။ ဒီသင်တန်း၏ခေါင်းစဉ်များဒိုမိန်းဒီဇိုင်း, အဖြစ်အပျက်မောင်းနှင်ဗိသုကာနှင့်ဓာတ်ပြု programming ကိုမောင်းနှင်, ဗိသုကာစတိုင်များ, ပေါင်းစည်းမှုနည်းစနစ်များနှင့်ပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ (4 ခရက်ဒစ်) ။ (အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်)
Software များဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Practicum (CS 575)
ဒီ practicum သင်တန်းကျောင်းသားများသည်တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေအထားတွင်ကွန်ပျူတာ-related တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်။ ဖျော်ဖြေအဆိုပါတာဝန်များကိုအသစ်သောစနစ်များသို့မဟုတ်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားစနစ်များ၏လျှောက်လွှာများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Practicum အလုပ်ဖော်ပြချက်အလုပ်ရှင်နှင့်ကျောင်းသားများကရေးဆွဲပြီးနှင့်ကျောင်းသားထားရှိရာ practicum ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်အတူတိုင်ပင်အတွက်ဌာန၏ဘွဲ့ရဒြေ၏တဦးတည်းအားဖြင့်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ (ဤသင်တန်းအလုပ်သင်သို့မဟုတ်သမဝါယမအစီအစဉ်များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်အဓိကအားဖြစ်ပါသည်။ ) (ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှုန်း 0.5-1 ယူနစ် - ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။ )
အချိန်ပြည့် paid Internship
ဆော့ဖ်ဝဲ developer ဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်တက္ကသိုလ်အတွက်မိုက်ကရိုဆော့ဖအပါအဝင်များစွာသောအမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဆန္ဒရှိမည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောလေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သကဲ့သို့သင်တို့လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေး Intern များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှစတင်နှုန်းထားများသည်လက်ရှိတစ်နှစ်လျှင် $ 80,000 ဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုသင်ပြင်ဆင်ပါ အလုပ်ရှာဖွေရေးသင်တန်းနှင့်အတူသင့် Paid Internship Begin မှ
ကျွန်တော်တို့၏ Ph.D ဘွဲ့ကို level ဌာန သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Ph.D ဘွဲ့ကို level ဌာနသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအာရုံစိုက်နေကြသည်
Keith လေဝိ, Ph.D ဘွဲ့ကို
BS, Maharishi နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်
MA, MS, Ph.D ဘွဲ့ကို မီချီဂန်တက္ကသိုလ်
Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကို
BS, MS, Ph.D ဘွဲ့ကို, Purdue တက္ကသိုလ်
ဘရုစ်ကမျ့ဘဲလျ, Ph.D ဘွဲ့ကို
BS, MS, Ph.D ဘွဲ့ကို နည်းပညာတက္ကသိုလ်မက်ဆာချူးဆက်
Premchand Nair, Ph.D ဘွဲ့ကို
B.Sc. , Kerala တက္ကသိုလ်
M.Sc, Kerala တက္ကသိုလ်
Ph.D ဘွဲ့ကို, Kerala တက္ကသိုလ် (သင်္ချာ),
Ph.D ဘွဲ့ကို, Concordia တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ)
ရှင်ပေါလု Corazza, Ph.D ဘွဲ့ကို
BA, Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်က MS,
Ph.D ဘွဲ့ကို, Auburn University က
Emdad Khan က, Ph.D ဘွဲ့ကို
BS, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, အင်ဂျင်နီယာ & နည်းပညာဘင်္ဂလားဒေ့တက္ကသိုလ်
က MS, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, New Orleans တက္ကသိုလ်
က MS, အင်ဂျင်နီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်
Ph.D ဘွဲ့ကို, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Santa Cruz
Renuka Mohanraj, Ph.D ဘွဲ့ကို
B.Sc. , ဒတက္ကသိုလ်
MCA, Bharathidasan တက္ကသိုလ်
M.Phil ။ , Periyar တက္ကသိုလ်
Ph.D ဘွဲ့ကို, Mother Teresa တက္ကသိုလ်
Clyde ပတ္တမြား, Ph.D ဘွဲ့ကို
MA, MS, Maharishi နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်
Ph.D ဘွဲ့ကို, Iowa ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
ထိပ်တန်း 3% တက်ကြွနှင့်ပူးပေါင်းသင်ယူမှု
ထိပ်တန်း 7% ကျောင်းသား-ဒြေအပြန်အလှန်
ထိပ်တန်း 4% ပညာရေးအတွေ့အကြုံများတပုဒ်ကို
ထိပ်တန်း 8% ထောက်ခံကျောင်းဝင်းပတ်ဝန်းကျင်
ထိပ်တန်း 26% ပညာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှု၏အဆငျ့
Program ကိုကုန်ကျစရိတ်: ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောငွေပေးချေမှုရမည့်အစီအစဉ်လွယ်ကူစေသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအစီအစဉ်ကို Join ရန်အဘို့အ
$ 3,000 များအတွက်အစီအစဉ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ - $ 7,500
$ 3,000 များအတွက်အစီအစဉ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ - $ 7,500 ။
ကျန်ရှိသောပရိုဂရမျကုန်ကျစရိတ်သင်တစ်ဦးပေးဆောင်အလုပ်သင်အနေအထားလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်သည်စီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် '' ကျောင်းသားချေးငွေ '' ကတဆင့်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။
အားလုံးနီးပါးကိုအမေရိကန်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားကျူရှင်ဖုံးအုပ်ချေးငွေများ, အဖိုးအခ, အိုးအိမ်များနှင့်အစားအစာများ, ပေါင်းငွေသားရနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုဟာဖုံးလွှမ်းခံရဖို့တစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ။
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုကနေ Ph.D ဘွဲ့ကိုအထိသင်တန်းများကမ်းလှမ်း အဆင့်။ ဤသည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, စာရင်းကိုင်, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး, ဝေဒသိပ္ပံ, စတူဒီယိုအနုပညာ, Maharishi Ayurveda နှင့် Integrated ဆေးပညာသခင်၏ဒီဂရီပါဝင်သည်။ ကျောင်းသားများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS များအတွက် 48 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 2500 + ဘွဲ့ရအပါအဝင်အတိတ် 85 နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကနေဘွဲ့ရပါပြီ။
တစ်ဦးကကနျြးမာရေးအသိပညာပေ & တိုးတက်ရေးပါတီအဝန်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းအတွက် "ယဉ်ကျေးမှုအိုအေစစ်" အဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဖဲရ်ဖီးလ်စားသောက်ဆိုင်, ဆုရကျောင်းများ, ကျန်းမာရေး Spa မ်ားနှင့်တက်ကြွအနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခု featuring multi-ယဉ်ကျေးမှု, Multi-ပါရမီအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ဂီတပွဲတော်များ, ပြဇာတ်ရုံဖြစ်ရပ်များနှင့်အနုပညာပြပွဲမှအိမ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားပန်းခြံများ, ရေကန်များနှင့်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့လူထုအားကစားရှုပ်ထွေးပြီးရေကူးကန်လည်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Transcendental Meditation®နည်းစနစ်မှတဆင့်
အမြတ်နက်ရှိုင်းအနားယူ & ထွန်းလင်းအတွေးအခေါ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွက်အောင်မြင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုပူးတွဲတင်ပြထားများအတွက်ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးနည်းပညာများကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်, အသက်ရှင်ခြင်း၏အရည်အသွေး, စိတ်ဖိစီးမှုကနေကယ်ဆယ်ရေး, ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်အ Transcendental Meditation® technique ကိုလေ့လာပါ။
အဆိုပါ Transcendental Meditation® technique ကို (TM) 20 မိနစ်နှစ်ကြိမ်တစ်ခုချင်းစီကိုနေ့အဘို့တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားအားလုံးနှင့်ဝန်ထမ်းများအားဖြင့်ကျင့်သုံးမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့, သဘာဝ, အင်အားစိုက်ထုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။
380 ကျော် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများနက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေ, သာ. ကြီးမြတ်ထောက်လှမ်းရေး, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပိုပြီးစွမ်းအင်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်လုပ်ရန်ဒီရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထောကျပံ့။
TM အလိုအလျောက်တစ်ဦးဘာသာရေး, အတွေးအခေါ်, ဒါမှမဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မဖြစ်နှင့်မျှမတို့ယုံကြည်ချက်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်သုတေသနပြုနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, ကျောင်းသားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသန်းပေါင်းများစွာအားဖြင့်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
ပါဝင္ရန္ 3,000 ကျော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ & 100 နိုင်ငံများ မှစ. ကျောင်းသားဟောင်းများ
အဆိုပါကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ် 22 နှစ်အတွင်းအဘို့အပြေးနှင့်အကြီးဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးမာစတာရဲ့ USA တွင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Programs ကိုအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
သငျသညျ3ထဲက4တစ် GPA နိမ့်ဆုံးနဲ့အသိအမှတ်ပြုကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကနေကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက် 2.7-4 တစ်နှစ်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဘာသာရပ်အပိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 2.7 အောက်တန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်သင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်ဝန်ခံချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေအတွက်အပိုင်းအပေါ် (70) ပါ GRE ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုယူနှင့်အနည်းဆုံး 158% ဂိုးသွင်းဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။
2 ။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ
4 နှစ်ဒီဂရီဘွဲ့ရအိုင်တီအတွေ့အကြုံကိုအလုပ်လုပ်6လနိမ့်ဆုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
3 နှစ်ဒီဂရီဘွဲ့ရအိုင်တီအတွေ့အကြုံကိုအလုပ်လုပ် 2-3 နှစ်ပေါင်းနိမ့်ဆုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
မှတ်စု: မြင့်မားသော GPA နှင့်မျှမတို့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဗိုလ်လုပွဲတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
3 ။ အသိပညာအဆင့်
နေ C, C #, C ++ သို့မဟုတ် Java ကို 8 သို့မဟုတ် 9: သင်ကဤဘာသာစကားများတဦးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4 ။ ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှု
သငျသညျကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်ဖတ် ပြော. နားလည်နိုင်မည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ TOEFL မဟုတ်သလို IELTS ကိုမလိုအပ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်ရန်ဖုန်းသို့မဟုတ် Skype ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပါ။
5 ။ ဒေတာကိုသိပ္ပံ Track (Optional)
ရှိပါတယ် အပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များကို ဒီလမ်းကြောင်းသို့ဝင်ပေါက်သည်။
6 ။ ဘွဲ့လွန်စံချိန်တင်စာမေးပွဲ (GRE)
အများဆုံးနိုင်ငံများအဘို့မလိုအပ်ပေမယ့်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါ GRE ယေဘုယျစမ်းသပ်မှုယူရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး GRE ရမှတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကိုကျောင်းအပ်အပေါ်သို့ပေးဆောင်ဖို့တောင်းနေကြသည်ကနဦးပမာဏကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ပါ GRE ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာရယူ International ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။
GRE ကနေအားလုံးလျှောက်ထားခြင်းမှလိုအပ်ပါသည် အိႏၵိယ နှင့် အီရန်သငျသညျ paid ပရော်ဖက်ရှင်နယ် programming ကိုအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏2နှစ်သို့မဟုတ်ပိုရှိသည်, သင်၏ GPA 3.0 (ခပျှမ်းမျှ) အထက်တွင်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်။
အောက်တိုဘာလ / နိုဝင်ဘာလ
ယူအက်စ်အေ: + 1 641-472-1153
သေဆုံးသူအခမဲ့: (800) 532-4956
စာမျက်နှာ PDF အဖြစ် Download
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါသည်